Efa ambany ve izao Netflix? Hamarino ny toerana misy anao - Ahoana No
Noho izany, misy fotoana rehefa eo afovoan'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra na sarimihetsika ianao. Saingy, tampoka tampoka dia tsy hampidirina intsony i Netflix. Azonao atao hatrany ny manindry ny bokotra filalaovana. Saingy, mbola tsy jerenao ihany.Azontsika antoka daholo fa azo itokisana i Netflix. Saingy, ny programa streaming rehetra dia mety tsy hahazaka ireo olana mifandraika amin'ny fifandraisana Internet.
Indraindray dia nidina teo aloha i Netflix ary azontsika antoka fa hidina indray izany amin'ny ho avy tsy ho ela. Ny antony dia mety misy olana amin'ny fifandraisana Internet. Eny, raha mitranga aminao izany dia tsy mila mikoropaka ianao. Andao hojerentsika ny fomba hahitanao raha tena midina afovoany i Netflix na raha avy aminao ny olana.
Misy ihany koa ny fotoana ahazoanao hafatra toy ny 'Tsy misy azo jerena eo noho eo ity lohateny ity'. Mihevitra ve ianao fa misy zavatra mahasosotra kokoa noho ny mahazo an'io hafatra io? Ary avy eo manandrana lohateny hafa ianao. Saingy, mahazo hafatra diso ihany ianao ho an'ny lohateny tokana izay ao amin'ny tranombokinao? Ireto ny sasany amin'ireo olana atrehin'ny maro amintsika rehefa mampiasa Netflix isika.
Olana amin'ny fifandraisana amin'ny tambajotra Netflix?
Raha ny mahazatra, rehefa miaina olana amin'ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra i Netflix, dia hahita iray amin'ireo zavatra efatra ianao, na tsy ho mavesatra tanteraka ny Netflix na angamba hampiditra ampahany i Netflix, hahazo hafatra diso ianao, na koa hoe hampiditra Netflix fa nandresy 'tsy mamela anao hilalao lohateny. Soa ihany fa mora alamina daholo ireo olana ireo.
Tsy mahomby amin'ny famenoana tanteraka i Netflix:
Mety misy fotoana tsy hampidirana ilay pejy mihitsy rehefa eo amin'ny birao ianao. Na dia manandrana miditra amin'ny Netflix amin'ny fahitalavitra marani-tsaina, Roku, rafitry ny filalaovana, ny takelaka misy anao na ny finday finday misy anao aza ianao dia tsy hampiditra azy fotsiny. Noho izany, raha miatrika olana ianao ary tsy afaka mankany Netflix mihitsy dia betsaka ny vintana ahazoana ny olana amin'ny fifandraisana eo anilanao.
Ny azonao atao dia, ampiasao ilay fitaovana mitovy amin'ny ezahinao jerena amin'ny Netflix na hanokatra sehatra streaming hafa na handeha amin'ny tranokala. Raha mavesatra io sehatra na tranokala hafa io, mahavariana. Avy eo dia ho fantatrao fa io olana io dia misy ifandraisany amin'ny Netflix. Raha tsy mavesatra izy dia tsara kokoa ny mamono ny zava-drehetra ary mametaka ny router.
Hamarino tsara ihany koa fa ny sehatra ampiasainao sy ny app-nao Netflix dia vaovao. Raha vantany vao fantatrao fa miverina miasa tsara ny Internet anao dia zahao izay fanavaozana ny app Netflix.
Netflix ampahany amin'ny enta-mavesatra:
Olana iray hafa mety ho sendra ny mpampiasa azy io rehefa nandalo teo amin'ny birao izy ireo. Ny tranokala lehibe Netflix sy ny mombamomba azy dia hipoka, fa ny tranokala dia mainty tanteraka fotsiny na misy banga goavambe misy ny lohateny tsy hita.
Azonao atao ny manamboatra an'ity olana ity amin'ny alàlan'ny pejy vaovao haingana. Ny hany mila ataonao dia, mamelombelona ny pejy indroa mandra-piverin'ny Netflix amin'ny laoniny.
Netflix dia mampiseho hafatra diso:
Raha manohy mahazo kaody hadisoana ianao dia tokony ho fantatrao fa tena nanana olana teto ianao. Tsy maninona na impiry na impiry ianao manandrana mamelombelona an'i Netflix, dia mbola hanana kaody hadisoana mitovy ihany.
Raha mahazo kaody diso ianao rehefa manandrana mijery sarimihetsika na zavatra hafa dia mandehana mankany amin'ny pejy fanampiana an'i Netflix. Raha vantany vao mandeha any ianao, dia ampidiro ny kaody diso na hafatra efa azonao mivantana tao amin'ny bara fikarohana. Aorian'izany, hanome anao torolàlana amin'ny dingana tsirairay i Netflix momba ny fomba ahafahanao manamboatra ity olana ity.
Mampandeha ny Netflix fa tsy hamela anao hilalao lohateny:
Hitanao fa normal daholo ny zava-drehetra. Miasa tsara i Netflix, ary azonao atao aza ny mahita ny lohateny rehetra aseho tsy misy olana. Saingy, manomboka ny olana rehefa manandrana milalao lohanteny ianao, tsy misy izay mandeha. Raha toa ka maharaka ny Netflix ary avy eo mamelombelona hatrany hatrany ary avy eo manandrama milalao ilay sarimihetsika. Saingy, mbola tsy vitanao ny milalao azy io dia mety hisy ny fahafaha-manoatra noho io olana io eo amboninao. Netflix mety hidina amin'ny tena izy.
Tokony ho azonao antoka fa hamaha ny olana rehetra natrehinao i Netflix. Raha efa nanontany tena ianao raha tena kivy i Netflix sa ianao irery no miatrika an'ity olana ity noho ny Internet dia azonao atao ny manamarina ny IS NETFLIX Down? Ny pejy izay ho hitanao ao amin'ny foibe fanampiana ny serivisy mivantana.
Raha hitanao fa tena ambany ny Netflix, dia afaka miantso an'i Netflix ianao na miresaka mivantana amin'ny mpiasa Netflix.
Azonao atao koa ny mifandray amin'ny laharan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa Netflix (1-866) 579-7172. Raha tianao halamina haingana kokoa ny zavatra dia mila miomana ny kaonty kaontinao. Ho hitanao mora ny kaody kaontinao amin'ny alàlan'ny fanodinana mankany amin'ny faran'ny pejy fandraisam-bahininao Netflix ary avy eo tsindrio ny Kaody Serivisy.
Azonao atao ihany koa ny mahazo ireo rohy hiaina mivantana amin'ny chat izay misy ihany koa amin'ny pejy misy ny ivon-toerana fanampiana Netflix.
Raha mitohy ny olana dia ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny miandry ny famahana ny olana. Ny kaonty Twitter an'i Netflix dia nahazo fitarainana marobe ary tsara koa tamin'ny famahana haingana ireo olana.
Ny marina, na inona na inona mitranga na inona no olana, andramo ny tsy hikoropaka na ho tezitra amin'izany satria Netflix dia iray amin'ireo serivisy mivantana azo atokisana any. Raha milatsaka izy izao dia mety hiverina tsy ho ela raha vantany vao voavaha ny olana.
Mety hiatrika olana toy izany ianao amin'izay mety hahatsapanao ho toy ny ambany i Netflix ka mety hampahatezitra anao indraindray. Eny, ny hany azonao atao dia zahao ny fifandraisana Internet anao ary alao antoka fa havaozina ny app Netflix satria mety miatrika ireo olana ireo ianao satria efa taloha ny kinova fampiharana anao. Raha mandeha izany dia tsara. Raha tsy izany dia azonao atao ny manandrana mamantatra ny olana amin'ny alàlan'ny fankanesana any amin'ny ivon-toeran'i Netflix na miantso ny laharan'ny serivisy fikarakarany mpanjifa na mety miresaka mivantana amin'izy ireo mihitsy aza ianao ary hahalala hoe inona ny olana lehibe. Raha mbola tsy mandeha izany dia ny hany azonao atao dia ny miandry fotsiny ny Netflix hanamboatra ilay olana dia ho afaka ianao avy eo mijery toy ny sarimihetsika na fandaharana amin'ny fahitalavitra tianao.
tontolon'ny tanky misoratra anarana
windows 8 emulator ho an'ny Windows 10
tumblr vonoy ny android azo antoka
sarimihetsika disney an-tserasera sarimihetsika feno maimaim-poana